Category:Ipolitiki - Wikipedia
Isichazi magama kunye ne-encyclopedia bachazwa ngolu hlobo lulandelayo. "Xa sichitha ukuyilwa ucwangco inani labantu, kwabanye umntu, naye phenomenon enxulumene imisebenzi. SaMandla, imigaqo-nkqubo kunye noLawulo kunye ukuzimela ukwenza kunye nabanye." Ngowe Kojien oko imiselwe ku. In Daijisen njenge "1. enguMongami, kunye ukudibanisa lonke uluntu ngokulungelanisa imeko-impixano kunye nomdla .2. Uluntu elawula intsimi, abantu, ukwenza izigqibo zentlalo, inyathelo. Ukuze kwenzeke oku" Apho. Isazinzulu Political Robert Dahl (1912 - 2014) ithatha indawo ukuze zifake kwizinto ezenzeka amandla ngokubanzi kuluntu kunye kwezopolitiko, kwaye ukuba ubudlelwane ezopolitiko ngokubanzi, ezifana kuquka igunya namandla-mthetho, kwaye kufuneka kuchazwe. Kwincwadi ka-2002 yakuloAndreya Heywood, "Umsebenzi apho abantu benza, kulondolozwe bayihlaziye imithetho jikelele abaphila phantsi kwazo." (Imisebenzi ezenza imithetho jikelele malunga nendlela yokuphila abantu, ndisindise, hlaziya) imiselwe ukuba ibe.
Ipolitiki yindawo enzima echaphazela uluntu jikelele kwaye ineempembelelo ezahlukeneyo ebomini bomntu ngamnye ohlala kuluntu. "Xa sichitha ukuyilwa ucwangco inani labantu, kwabanye umntu, naye ubomi. Eyalo ngaphandle kunye nabanye 'kwi Kojien kodwa bengenalo, ezopolitiko, indawo yokuqala ntoni ngamnye kwaye wonke umntu ahlala uluntu kwaye noluntu okanye onjalo ebalulekileyo, ukuba uluntu kunjalo nje isimo esihle karhulumente, naye ukuphatha ukuba, ezithile ezahlukeneyo nokuba ukuthanda labantu ukuba ukhethe enye kwintando yabantu, ngayo nayiphi na indlela Kwakhona kunxulumene ngokukhethekileyo nokukhetha.
Aristotle of Greece yamandulo, nto leyo imele i "inzululwazi lezopolitiko", nto leyo Classic, kuyo umbhali ukuba ndiyinkosi inzululwazi ukuzama ekuqondweni inzululwazi kwezopolitiko ukufunda 'uluntu olungileyo' ezopolitiko. Isikhundla esinjalo sibonisa ukuba iipolitiki inepropati yokusebenzela uluntu ukuqonda uluntu oluhle. Ngeli lixa libambe kwi uluntu ngenxa ezopolitiko na uluntu elungileyo, yintoni na ungquzulwano kunye nentsebenziswano kwi umbuzo wokuba ingaba elungileyo kazulu zifakiwe kwezopolitiko mmandla. Hannah Arendt sobulumko kwezopolitiko malunga kule nkalo ithathwa njengenye "imeko yabantu", ezikhuthaza esebenzisa ulwimi abanye ezahlukeneyo kunye self-kwezopolitiko, isenzo apho sibopha. Oko ipolitiki kwaye ukuze kuphunyezwe ukuba ukuhlala nabantu kuluntu ezimnandi zezokuba isibheno kwibutho yaye yintoni na enokuthethwa sikhatshwa iingxoxo kwisigqibo ngendlela izinto ezilungileyo.
Ekuwungqingeni Isakhiwo eneenkcukacha ngakumbi kwezopolitiko, ezopolitiko kunye ingxaki injongo nendlela bekhuthaza zentlalo, ngokubanzi yahlulwe kwezopolitiko ingxaki emisiweyo indlela asebenze ngayo kuluntu Unako. Noko ke, kule kwezopolitiko eneneni lo iingxaki ezimbini zezo kuvela uhlobo engumxube, nto leyo ichazwe kwi ingxoxo oko zezopolitiko njengoko kuchaziwe ngezantsi. Ukusuka kwinjongo yokujonga, iipolitiki zinika umyalelo kuluntu, kwaye inkqubo yokulawula i-dynamics yayo ihlelwe. Kunye namaziko kazwelonke elawula ummandla kunye nabantu phantsi ulongamo, indlu yowiso-lokuhlela isebenza uhlanga, lo mbutho yesebe kunye norhulumente yesigqeba ebizwa isebe egwebayo, kwaye zisekelwe kwimigaqo yedemokhrasi yokunyula inkqubo Daigi umlawuli ezifana , Kukho amaqela amaninzi ezopolitiko. Ukongezelela, izenzo zezopolitiko zithintela ingqalelo kuphela kwinkqubo yamaziko, kodwa kunye neemeko zezoqoqosho nezenkcubeko kunye namaziko afana neenkampani kunye nemibutho yoxinzelelo. Ukunyakaza kweentlanga kunye nemisebenzi yoqhagamshelwano oluninzi kubangela ukusebenzisana kwezopolitiko.
Emva koko, ukuba sihamba kwiingxaki eziqhelekileyo zezopolitiko, iindidi ezahlukeneyo zezopolitiko ziphendula kule ngxaki. Kwiimbono sezopolitiko inkqubo izimvo ukukhokela sengqondo kwezopolitiko malunga iingxaki ezahlukeneyo njengoko ziza kuchazwa kamva, lo liberalism enohlobo kunye conservatism kwabo, olobusoshiyali, nezinto ezinjengezo. Kukho kwakhona imigaqo yokhuseleko ezilwela nakokusingqongileyo kwiingxaki ngamnye, ngakumbi uhlobo sengqondo kwezopolitiko nalapho siya kubandakanya nkqu fundamentalism unqulo ithathwa njengento ezahlukeneyo. Indlela yemvelo le ngxaki uhlobo kunye nezentlalo nezithethe zabantu ukuba ezi zimvo kunye zengqondo ngumba enkulu kunye nenkululeko kunye ukulingana, yaye umlawuli igunya yokuba esekelwe kwimigaqo ezifana nolonwabo kunye nobulungisa, i isarha Ilungelo lomntu kunye nolunye olunjalo lwandisiwe. Ezi iingxoxo wabeka isiseko theoretical umyalelo kwezopolitiko ezikhona, ibonisa-siseko, umgaqo-nkqubo angaphandle, unyulo, amalungelo oluntu, kwimarike, ntle, njengemfundo enyanzelekileyo, endleleni, ezifana yokhuselo lwesizwe.
Kule nto sijongana ngokubanzi nezifundo zezopolitiko ukunceda abafundi baqonde ngokubanzi kwiipolitiki. Ngoko thabatha iindihloko ezibalulekileyo uze ubone into nganye kwiinkcukacha. Ngoko ke, kwiSahluko 1 bachaza intlobo kwezopolitiko kunye namandla kunika esekelwe ingqiqo esisiseko kwezopolitiko, umgaqo wokuziphatha, ngoko liberalism enkulu njenge ideology kwezopolitiko, conservatism, ziphimisele phezu yobusoshiyali. Le ngegqudu ukusuka kwindawo umbono kwenkqubo yezopolitiko, totalitarianism, cinga ngeempawu ngegqudu, nayo ezopolitiko yesizwe neyamazwe ngamazwe ukuba wenza njengoko kwezopolitiko indlela eya ukuzoba. Kunye namaqela ezopolitiko kunye abemi ezenza inkqubo yezopolitiko, ugxininise intsebenziswano kwezopolitiko imibutho ezinjalo, nokhunye ezifana yowiso-mthetho kwaye isebe yesigqeba kwakhona inkqubo yolawulo le. Ekugqibeleni, sichaza indawo yenkqubo yomgaqo-nkqubo wezopolitiko. Apha, izinto ezahlukeneyo ezopolitiko yesizwe imeko yezopolitiko kunye nembali yezopolitiko eli lizwe ukuba ayikwazi zingaqwalaselwa ngokweenkcukacha, malunga kwiipolitiki iindlela neengcamango ukufunda lezopolitiko kubona inzululwazi kwezopolitiko. emva koko sibuze yintoni imvelaphi yegama elithi intloko yomthi.
Last edited on 18 EyoKwindla 2021, at 23:51
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-18 EyoKwindla 2021, kwi-23:51